अंग्रेजी कसरी सिक्ने ? जान्नुहोस् यी अचूक उपाय ! - Everest Dainik - News from Nepal
अंग्रेजी कसरी सिक्ने ? जान्नुहोस् यी अचूक उपाय !
काठमाडौं । देशभित्र होस् वा विदेशमा अंग्रेजी भाषामा दक्षता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अंग्रेजी भाषा राम्रो भएका व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउने मात्र होइन, विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि पनि अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण रहेको छ ।
कतिपय व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तहसम्म भए पनि राम्रो अंग्रेजी बोल्न र लेख्न नजान्दा उचित अवसर पाउनबाट वञ्चित हुन सक्छन् । कतिपयले आइएलटिएस वा अन्य भाषा दक्षतामा राम्रो स्कोर ल्याए पनि बोल्न कमजोर हुन सक्छन्, कोही बोल्न सके पनि लेख्न नसक्ने पनि हुन्छन् । अंग्रेजी कसरी राम्रो बोल्न र लेख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही सुझावः
-अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग सिक्नका लागि सबैभन्दा पहिले लाज हटाउनुपर्छ । बोल्दा गल्ती भए पनि अंग्रेजी माध्यममा बोल्न छाड्नुहुँदैन ।
याे पनि पढ्नुस अचम्म ! यहाँ छ अंग्रेजी देवीको मन्दिर, मन्दिर गए फरर्र अंग्रेजी सिक्ने विश्वास
-आफूलाई अंग्रेजी बोल्न जति आउँछ, त्यति बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अंग्रेजी भाषा बोल्दा गल्ती भए पनि निरन्तर बोलिरहनुपर्छ । बोल्दै गएमा बिस्तारै राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न सिकिन्छ ।
-अंग्रेजी बोल्दा लामालामा वाक्य प्रयोग गरेर कहिल्यै बोल्नुहुँदैन । अंग्रेजी बोल्दा जहिल्यै पनि एकदमै छोटो वाक्य बनाएर बोल्नुपर्छ । लामा वाक्य बनाएर बोल्दा भाषा बिग्रन सक्छ ।
-अंग्रेजी भाषामा दक्षता बढाउनका लागि किताबी ज्ञान भएर मात्र हुँदैन, नियमित रूपमा बोल्न र लेख्न प्रयास गर्नुपर्छ ।
-अंग्रेजी भाषाको साउन्ड नै बिगारेर बोल्नुहुँदैन । अंग्रेजी भाषाको साउन्ड सही उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जसले गर्दा अंग्रेजी बोलेको पनि मीठो सुनिने र सबैले बुझ्ने हुन्छ ।
-प्रायजसो नेपालीहरू राम्रोसँग बोल्न नजान्दा अंग्रेजी भाषा बोल्न हिचकिचाउने गर्छन् । अंग्रेजी भाषा एक-आपसमा सञ्चार गर्ने माध्यम मात्र हो । अंग्रेजी भाषा बोल्न जान्दैमा सबैमा बौद्धिकता झल्कन्छ भन्न सकिँदैन ।
-भाषा बोल्दा व्याकरणको राम्रो प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । फरर्र अंग्रेजी बोल्दैमा राम्रो पनि मान्नुहुँदैन । फरर्र बोल्दा धेरै गल्ती हुन सक्छ । व्याकरण भनेको भाषाको शृंगार पनि हो । मान्छेले लुगा नलगाउँदा जति नराम्रो देखिन्छ, भाषामा व्याकरण गलत प्रयोग त्यत्तिकै नराम्रो हुन्छ ।
-अंग्रेजी होस् वा अरू कुनै पनि भाषा सिक्नु भनेको आफैँमा जटिल विषय हो । अर्काको देशको भाषा दोस्रो देशका मान्छेले सजिलै बोल्न कठिन नै हुन्छ । तर, निरन्तर प्रयास गरेमा सजिलै बोल्न सकिन्छ ।
-विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा गएर मात्र भाषा सिक्न सकिँदैन । त्यहाँ पनि बोल्न प्राक्टिस गराउने हो । आफूले अंग्रेजी बोल्न प्रयास नगरेसम्म कन्सल्टेन्सीमा गएर मात्र भाषा सिक्न सकिँदैन ।
-अंग्रेजी भाषा नियमित रूपमा बोल्ने, लेख्ने, पढ्ने गर्नुपर्छ । नेपालीले अंग्रेजी भाषा बोल्दा निकै
गलत बोल्छन् । नयाँ पत्रिकाबाट साभार
ट्याग्स: English Language, English speaking